Muqdisho:Boliis taraafiko oo la dilay - BBC Somali
Muqdisho:Boliis taraafiko oo la dilay
Image caption Boliiska taraafikada ayaa magaalada ku soo laabtay waqti badan kadib.
Laba boliis oo katirsan boliiska taraafikada ayaa lagu dilay jidka isgoyska dabka ee Muqdisho. Sida uu BBC u xaqiijiyay taliyaha taraafikada Gen Cali Xirsi, niman bistoolat watay ayaa toogtay laba kamid ah boliiska taraafikada oo kala watay darajo laba xidigle iyo laba alifle.
Askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa isagana lagu dilay suuqa xoolaha ee degmada heliwaa. Waxaa askariga laga qaaday qorigii uu sitay, markii la dilay sida uu BBC u sheegay ganacsade joogay goobka markii dilka uu dhacay.
Dilkan ayaa yimid iyadoo dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin lagu adkaynayo ammaanka Muqdisho oo loogu magacdaray Nabad ku Afur.
Dowladda ayaa heshay xog in Alshabaab ay kordhinayso weerarada bisha Ramadaan.